I-China CPLA + i-bamboo yezityalo-esekwe kwiPlanethi engafakwanga isi-7 ye-intshi ye-Cutlery neFektri | Gianty
I-CPLA (Crystal PLA) yinto entsha yezinto eziphilayo ezinokuveliswa yikristale yeemoleky esekwe kwinto yePLA. I-CPLA inobunzima bokulungisa, icombulula ingxaki yokuxhathisa kwamaqondo obushushu ePLA, Ukushisa ubushushu ukuya kuthi ga kwi-85 ° C. Yinto eyenziwe ngaphandle kwe-chlorine engenasifo, inochuku kwaye ayinabungozi. Akukho mphunga ingaqhelekanga kwaye Akukho kuvuza. I-CPLA ziintlobo-ntlobo zeemveliso ezinobuhlobo kunye ne-eco-friendly. Iimveliso zeCPLA zinokufumaneka kwindawo yomgquba wentengiso kwisithuba esimalunga neentsuku ezili-180, ukuhla kwe-100% kwenzeka ngaphezulu kwexesha elincinci, kusuka kwindalo kuye kwindalo.
Edlulileyo: ICPLA esekwe kwiPlanethi engasetyenziswanga yiplasitiki engasetyenziswanga Hlaziya isayizi encinci yokusika
Okulandelayo: I-CPLA + I-bamboo esekwe kwizityalo engasetyenziswanga ePlasitiki engenasiseko i-6 intshi